2017 – Myanmar IT Academy
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Christmas ပိတ်ရက်လေးမှာ Python နဲ့ရေးထားတဲ့ Ipcalculator Program လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Linux ကိုကောင်းကောင်း ရင်းနှီးသူတွေကတော့ ipcalc Program လေးကိုသုံးဖူးကြမှာပါ။ အခုကလဲအဲလို Program လေးပါပဲ 😀 Python နဲ့ရေးပြီ exe ပြန် Export ထုတ်ထားတာပါ။ Exe ဖြစ်သွားတော့ Microsoft Windows Command Continue Reading
Posted On : December 25, 2017 Published By : mmit
Complete Network Engineering Course
Hello….. 😀 😀 ကျွန်တော်တို့ Myanmar IT Academy မှ 2018 New Year ၁လပိုင်း မှာ Networking တန်းခွဲအသစ်ဖွင့်မည့်အကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။ အခုဖွင့်မယ့်တန်းခွဲကို Complete Network Engineering ဆိုတဲ့အတိုင်း Networking ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အခြေခံကနေ Advanced Level ထိ မြင်နိင်အောင်သင်ကြားပေးသွားမှာပါ။ Basic Network Concetps, Continue Reading
Posted On : December 20, 2017 Published By : mmit
Microsoft Server 2016 Datacenter Evaluation NAT & DHCP Installation & Configuration Video Tutorial
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ ပိတ်ရက်လေးမှာ Microsoft Server 2016 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Video Tutorial တစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Microsoft Server 2016 မှာ NAT Role Install လုပ်မယ် ပြီးတော့ NAT Config လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာ။ နောက်ပြီ DHCP Role Install ပြီးတော့ DHCP Scope Continue Reading
Posted On : December 18, 2017 Published By : mmit
Xen-Sever 6.5 OS Installation in VMWare ESXI 6.0 Video Tutorial
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Citrix ကထုတ်တဲ့ Xen-Server 6.5 OS Installation Tutorial လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Xen-Serverက တော့ လက်ရှိ Version 7.2 ထိထွက်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ 6.5 ပဲ ပြထားပေးတာပါ။ 😀 😀 Xen Server ကဘာတွေထူးခြားလဲဆိုတော့ Virtualization Server ပုံစံမျိုးပါပဲ 😀 နမူနာအနေနဲ့ပြောရရင် VMware Continue Reading
မိတ်ဆွေများ CCTV ရွေးချယ်မယ်ဆိုဘယ်လိုေ၇ွးမလဲ
ဒီနေ့ တော့ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ၊ ရုံးတွင်းအိမ်တွင်းသုံး CCTV Camera တစ်ခုကိုဘယ်လို ရွှေးချယ်မလဲဆိုတာလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ခေတ်မှာတော့ CCTV surveillance camera တွေနဲ့Recorder တွေဟာ Brand မျိုးစုံနဲ့ ဈေးကွက်အတွင်းမှာ တွင်ကျယ်စွာ ၀င်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ၊ brand အမျိုးမျိုးမှာ သူ့ ဟာနဲ့သူတော့ အားနည်းချက် အားသာချက် Continue Reading
How to Backup Cisco IOS Image Backup to TFTP Server Video Tutorial
Hello! ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Cisco နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Tutorial တစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Tutorial ထဲ့မှာ Real Cisco L3 Switch ရဲ့ ios image ကို TFTP Server ထဲ့ကို Backup ပြုလုပ်ပုံသင်ပေးထားပါတယ်။ TFTP Server ကိုတော့ Cisco Device ကို Manage Continue Reading
Posted On : November 28, 2017 Published By : mmit
Special thanks for our Website
Hello !! ကျွန်တော်တို့ Myanmar IT Academy Blogspot ကို ၄နှစ်ကျော်လောက် အစဉ်အဆက်အားပေးလာတဲ့ မိတ်ဆွေများကို ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Website နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Tutorial တွေ၊ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Post တွေကို ကျွန်တော်တို့ Website မှာပဲ တင်သွားတော့မှာပါ။ Tutorial အသစ်တွေ မတင်တာကြာပြီလို့ ပြောနေကြတဲ့ Continue Reading
Posted On : November 25, 2017 Published By : mmit